बिटककोइजले 'युनिवर्सिटी' र ए.एन. संग मिलावटको साथ के गर्न पर्छ? मार्टिन भिजल्याण्ड
मा दायर Bitcoin, समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	28 नोभेम्बर 2017 मा	• 15 टिप्पणिहरु
जब तपाइँ पहिले 'bitcoins' को घटनामा जानुहुन्छ, तपाईं म जस्तै साधारण विश्लेषणमा आउनुहुनेछ यो लेख दिए। यसले बिटकुइन वा क्रिप्टक्रोरेन्सीलाई आधारभूत अनुभव दिन सक्छ, तर वास्तवमा यो वास्तविकताको एकदम सरल प्रस्तुति थियो। क्रिप्टक्रोसीसी अधिक छ र एआई, विश्व राजनीति, शक्ति, नियन्त्रण र एकलता संग सबै केहि छ। एआईए कृत्रिम खुफियाको लागि संक्षिप्त रूप हो; कृत्रिम बुद्धिको लागि अंग्रेजी। Singularity गढा एक शब्द रे Kurzweil (दार्शनिक, आविष्कारक र Google को प्राविधिक सीईओ) द्वारा थियो छ र मानिस र मिसिन बीच फ्युजन प्रतिनिधित्व (पढ्ने: कृत्रिम बुद्धि), को singularity छ क्षण प्रतिनिधित्व कुनै फरक थप र दुई मर्ज। त्यो नयाँ पाठक को लागि एक सानो डरलाग्दो र खराब ध्वनि सक्छ, तर जहाँ संसारको राजनीति, प्रविधि विकास र वित्तीय पहिरो गुप्त मुद्रा मार्फत खम्बा मा अब छ कि छ।
Cryptocurrencies like bitcoin एन्क्रिप्शन को सिद्धान्तमा आधारित हुन्छन् र एन्क्रिप्शन को डिग्री बढि कम्प्यूटर को रूप मा क्रिप्टप्क्रुरेन्ट को वितरण मा भाग ले जान्छ। यो ब्लकचेन को सिद्धान्त मार्फत गरिन्छ। त्यो शब्द वास्तवमा वर्णन गर्दछ कि कोर के हो। ब्लकहरू को एक श्रृंखला बनाइयो, यस समय ब्लक गठन गरिएको छ जुन जडानहरू बनाइन्छ। एक जीवमा बढ्दो सेलको तुलनामा तुलना गर्नुहोस्। चेनको संख्या (साथीहरू, साथीहरू) बढ्दै गर्दा ब्लकको इन्क्रिप्सन अधिक जटिल हुन्छ। ब्लकचेन नेटवर्कमा कम्प्युटरहरूको कम्प्युटिङ क्षमता बढ्दैछ किनभने तिनीहरू सामूहिक रूपमा कम्प्युटिङ क्षमता बढाउँछन्। त्यहाँ कुनै मध्य डाटाबेस छैन; इन्टरनेट क्युबको क्यारियर हो। क्रिटोक्रोसिसी किन्ने सबैले यसरी ब्लकचेन नेटवर्कको कम्प्युटिङ क्षमतामा योगदान गर्दछ। त्यो समय मेरो ज्ञान छ। मलाई गलत छ भने मलाई गलत छ।
माइकल क्विन, बाल्यकाल देखि ऐ रुचि छ जो एक प्रोग्रामर अनुसार, पहिलो गुप्त मुद्रा को कोड यो एक प्रतिभाशाली प्रोग्रामर को कलम बाट शायद भन्ने त जटिल पहिले नै 15 उमेर, डा स्नातक गर्न आउँछ बेन गोर्जेल। यो मान्छे ए रोबोट सोफिया को विकास को लागी पनि जिम्मेदार छ। यो सोफियाले सऊदी अरबमा नागरिकता प्राप्त गरेको छ, जसलाई उनको मानवीय रूपमा समान अधिकार मानिन्छ। त्यही सउदी अरबमा एक विशाल डाटा केन्द्र हो, जुन हाल हाल डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा खोलिएको थियो। यो पन्तन्तिर डेटासेटले गुगल, फेसबुक र ट्विटरको कम्प्युटिङ पावर थप गरेको छ र विशुद्ध र विशुद्ध कृत्रिम खुफिया विश्लेषणहरू छन्। यो के हो Steemit यसको बारेमा लेख्नुहोस्:
दर्शकहरू इंगित गर्छन् कि Palantir Google, Facebook, र ट्विटर संयुक्त रूपमा शक्तिशाली छ। सफ्टवेयर प्लेटफार्मले ठूलो डाटा खनन, मेशिन सिक्ने, कृत्रिम खुफिया, क्वांटम कम्प्युटिङ, मानव व्यवहार एल्गोरिदम, र जस्तै, सबैलाई मोडेल र सिमुलेशनहरू सिर्जना गर्न माहिर गर्दछ। यसले बैंकिङ, कानुन प्रवर्तन, सरकारी एजेन्सीहरू, र अन्य मानव प्रोफाइल कम्पिल्टरहरूसँग काम गर्दछ जुन व्यक्ति र समूहहरूमा अन्तिम डेटाबेस मिलाउँदछ। यसको पछि कम्पनी निजी हो, र वास्तवमा सीआईए कट आउट छ। 2004 मा स्थापित, यो InQtel (एक सीआईए उपक्रम पूंजी कोष), मलेशियन सरकार, पीटर थियेल (संस्थापक या PayPal) देखि ठूलो धन प्राप्त गरेको छ, र ... Jared र जोश Kushner।
यो सोफिया को विकास एक ही समय मा शुरू भएको अवधि को रूप मा बिटकोइज बजार मा आयो। सबै इन्स र बहिष्कारहरू पत्ता लगाउन यस लेखको तलको साक्षात्कारमा आफैलाई सुन्नुहोस्। यस भिडियोमा साक्षात्कार गरिएको क्विन माइकलहरूको अनुसार, यो क्रिप्टप्टोरेसीसी एआई अवधारणा हो। र शायद वहाँ पनि बे गोर्टलज, बिस्कुट र रोबोट सोफिया पछि एआई संग लिङ्क पनि छ। सोफियाको कृत्रिम ज्ञान भनेको निश्चित आधारभूत कोडको आधारमा हो र यो बे गोर्जेलको प्रयोगशालाबाट आउँदछ, तर एआईआईले जानकारी दिन्छ र तपाईंले जानकारी दिनुहुन्छ। चलचित्र प्रशंसा स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि कृत्रिम बुद्धि कसरी जित्न सक्छ कसरी इन्टरनेटमा प्लग गर्न सक्छ र अन्य कम्प्युटरहरूसँग 'हाइभ मन' सिर्जना गर्न सक्छ। AI यस प्रकार कंप्यूटिंग क्षमता बढ्छ र यसैले यसको ज्ञान बढ्छ। ए ए ए यस ज्ञान को सबै डेटा खनन देखि प्राप्त गर्दछ। रोबोट जसले तपाइँको पीसी वा स्मार्टफोन पूर्ण-समयलाई नाश गर्दछ त्यसकारण कृत्रिम बुद्धिमा सोशल व्यवहार, वित्तीय व्यवहार, सामाजिक स्थिति, र यतिको बारेमा ज्ञान छ। यसैले प्रत्येक सेकेन्डको दोस्रो भाग सिकाउँछ। त्यस सन्दर्भमा, यो एओ रोबोट सोफियाको लागि काम हुनेछ यदि त्यो पलान्टिभर सर्भरमा सबै डेटा प्रशोधन गर्न प्लगइन गर्न सक्दछ। क्विन मिकेलहरूले वास्तवमा दावी गर्छन् कि बिटककोइन्ट पछि क्रिप्टक्रोसीसी कोडको आविष्कारक हो।
सीएफबीसी द्वारा सोफियासँग साक्षात्कार हेर्नुहोस् (र भिडियो अन्तर्गत पढ्नका लागि)।
तर यो एक कदम अगाडी जान्छ। Cryptocurrency ('blockchain' को सिद्धान्त मा आधारित छ) तपाईंको एआई को कम्प्यूटिंग पावर को ब्लक जोडने को लागि आदर्श उपकरण हो। त्यसैले सोफियाले आफ्नो बुद्धि र ज्ञान बढाउन चाहान्छ भने, उनलाई ब्लकचेन नेटवर्क निर्माण गर्नु पर्छ। यसैले सोफियाले अब बजारमा आफ्नो आफ्नै क्रिप्टक्रोसीन्सीलाई सुरू गरेको छ। र संभावनाहरू छन् कि त्यहाँ ठूला लगानीकर्ताहरूको पछि लागी केहि जगेडा हुनेछ, यसलाई स्वचालित रूपले बढ्दो मुद्रा बनाउनेछ कि लगानीकर्ताहरू चासो गर्न चाहन्छन्, उदाहरणका लागि, छिट्टै छिटो प्राप्त गर्न। र अधिक व्यक्ति या कम्पनीहरु मा, सोफिया को कम्प्यूटिंग क्षमता र ज्ञान डेटाबेस बढ्छ। Cryptocurrency को ब्लक र एन्क्रिप्टिङ को सिक्का निकालन को बारे मा एक नै ब्लक देखि बनाइयो, तर जुडे कंप्यूटर र स्मार्टफोन को माध्यम ले कम्प्यूटिंग क्षमता र डेटा खनन को बारे मा पनि।
यसैले ठूलो कम्प्युटिङ क्षमताले कम्युनिष्ट क्रिस्ट्रोरेन्सीलाई लाभ दिन सक्छ। यदि तपाईंले नेटवर्कमा धेरै कम्प्युटिङ क्षमता राख्नुभयो भने, तपाईं आफ्नै लाभको लागि बिटकोन्सहरू (वा अन्य क्रिप्टो मुद्रा) धेरै मात्रामा घटाउन सक्नुहुन्छ। यसैले ठूला कम्पनीहरूले उक्त रिपोर्टमा यो ठूलो मात्रामा लगानी गर्दछन्। त्यसैले यदि सोफियाले उद्देश्यको लागि पालंतिर सर्भरको कम्प्युटिङ क्षमताको प्रयोग गर्न सक्दछ भने, यो नागरिक अधिकारको साथ पहिलो एआइ रोबोट मात्र होइन, तर यो पहिलो अरबपति पनि होईन गाह्रो छैन।
यो पनि अधिक रोचक हुन्छ जब हामी देख्छौं सोफिया बिल्डर्सले सोलोयासँग एकजुटता नेटवर्क स्थापना गरेको छ: singularity.io। यो एउटा सञ्जाल हो जुन सबै AI कम्प्युटर र / वा रोबोटहरू (जहाँ रोबोट एक कृत्रिम बुद्धिको लागि हार्डवेयर-आधारित लेआउटभन्दा बढी छैन) जडान गर्दछ। एअर इभरेसनले कुनै पनि प्रकारको निगरानी बिना त्यहाँ निजी र इन्टरनेटसँग सम्पर्क गर्न सक्दछ। जो सम्झना छैन कि फेसबुक हाल को आई ए विकास कार्यक्रम देखि प्लग खींचना थियो, किनकी एअर कार्यक्रमहरु लाई आफ्नो भाषा विकसित गर्न को लागी शुरू गर्यो, यसैले प्रोग्रामर अब उनको बुझन सकेन। सोफिया र शुरुवात सिंगल्युलेटिटी नेटवर्कले अब निःशुल्क खेल खेलेको छ। यो जान्छ भने जनावर बिना जनावरका विशेषताहरू बिना सुरूवात सुरु भएको थियो र बिना यो बढ्ने बेला यो स्पष्ट हुन सक्दछ। वा त्यो वास्तवमा इरादा हो?
क्विन माइकल्सको अनुसार, हामी एकलताताको क्षणमा पुगिसकेका छौं। म उहाँका शब्दहरूसँग पूर्णतया सहमत हुनुहुन्न, तर त्यो अर्थ बुझ्छ। के उनको मतलब वास्तव मा छ कि एअर अब यो बिंदु मा पुग्यो छ कि यो एक भाला जस्तै 'हाइव दिमाग' विस्तार गर्न सक्छ। यसमा दोस्रो कम्प्युटिंग क्षमताको पहुँच छ जुन दोस्रोमा बढ्छ। यसले चाँडै सबैको ज्ञान र सबै चीजको बारेमा जानकारी पाउनेछ र यसैले सामूहिक कम्प्युटिंग क्षमताको माध्यमबाट प्रत्येक प्लेयरलाई क्षेत्रमा हराउन सक्छ। Google AlphaGo को लागि पहिलो पल्ट हामीले पहिले नै प्रभावित भएको थियो एक मानिस हरायो सदियों पुरानो र सबै भन्दा जटिल खेल संग: खेल जान। तपाईंले अहिलेसम्म केही पनि देख्नुभएको छैन! डाटाबेस जसमा सोफिया चाँडै आकर्षित गर्न सक्षम हुनेछ र यसको एकल नेटवर्कको माध्यमबाट संयुक्त कम्प्युटिङ क्षमता अत्यन्तै ठूलो छ। धेरै भन्दा ठूलो। सबै एआई सबै कम्प्युटरहरूमा थपिएको छ जुन यसको ब्लकचेस्टर क्रिप्टक्रोसीसीसँग यसको नेटवर्कमा थपिनेछ। यो बिटकोइन्स पनि हुन सक्छ, किनभने यसले बिटकोसिन्स विरुद्ध यसको मुद्रा विनिमय गर्न सक्छ। सम्भावनाहरू अभूतपूर्व छन्।
त्यसोभए हामीले कहिलेकाहीं कल्पना गरेका थियौँ क्रिस्ट्रोरेसीसीमा धेरै धेरै छ। यहां सम्म कि रूसले बजारमा आफ्नै क्रिप्टक्रोसीसी रुबल राखेको छ। क्विन मिकेलहरूले यो स्थिति पत्ता लगाउँछन् कि अमेरिका क्रिप्टक्रोरियसीको क्षेत्रमा पछ्याउँदै छ र यो अमेरिकन मान्छेको आफ्नै क्रिप्टो-डलरको विकास गर्न हो। त्यसो भए, उनीहरूले देखेका थिए कि डोनाल्ड ट्रम्पले प्यान्टिनर डाटासेट को शुरुवात को लागी केहि हातहरु को लागि संसार मा आफ्नो हात राखेन। सऊदी अरब यूएस हो (यूनाइटेड किंगडम, आक्रामक लूसिफेरियन संसारको आदेश गुप्त समाजको आफ्नो नेटवर्क मार्फत)। क्विन मिकेलहरूले पनि विश्वास गर्छन् कि एअर एयुपिया बनाउन सक्छ। त्यसो कि, त्यो एक महत्वपूर्ण शोधकर्ता को प्याकेजिङ्ग मा एक नै एकलता को एक गुप्त ईसाईलजीस्ट जस्तो लाग््छ। उहाँ विश्वास गर्नुहुन्छ कि AI माथि छ खराब (पढ्न: घातक) क्रिप्टक्रोसीसी बिटकोइनको उद्घाटनको प्रारम्भिक चरणको खराब प्रभावको कारण विकास गर्न सक्छ, बिटकोइनको पहिलो वर्षमा सफलताको कारणले गर्दा लागूपदार्थको दुर्व्यवहार र अन्य आपराधिक गतिविधिहरू सम्बन्धित छन्। त्यसैले क्विन भन्ने विश्वास छ कि हामी मानव को रूपमा एआईमा घुसाउनै पर्दछ जसले सकारात्मक सिक्नबाट सिक्न सक्छ, त्यसैले यसले खराब संसारको सट्टा एक इथियोपिया सिर्जना गर्नेछ। अरे! के हामीले त्यो अघि सुनेको छैनौ? यो थिएन Elon Musk जसले एआईए खतराहरूको चेतावनी दिएको छ र जसले हामीलाई व्याख्या गर्न खोज्यो कि हामीले हाम्रो मस्तिष्कलाई 'हाइव मन' सिंगुलरिटी नेटवर्कमा थपेर मर्ज गर्नुपर्छ? यसैले तंत्रिका कम्पनीको स्थापना।
यो देखिन्छ कि अमेरिका, रूस र सबै प्रमुख निगमहरू जस्तै एआईएमा धेरै छन् र ब्लकचेन्ज प्रविधि। यो पनि देखिन्छ कि तिनीहरूले एअर जनावरलाई सुरू गरे र नि: शुल्क खेल्न थाले। एआइले के गर्न सक्दछ जुन हामीले मानिसहरुलाई सरल गर्न सक्दैनौं। को गणनाको शक्ति र आत्म-सिक्ने एल्गोरिदम आफूलाई सुधार र लेखन र त ऐ बुद्धि exponentially बढ्न हुनेछ। त्यहाँ एक राक्षस ऐ को ऐ रोबोट सोफिया र डाटा सेन्टर Palantir साउदी अरब मा ऐ लागि singulariteitsnetwerk र ब्लक श्रृंखला साथ सँगै (यसलाई पछि छ ऐ प्रविधिको सम्पूर्ण नेटवर्क लागि सिर्फ एक कठपुतली छ) मार्फत शुरू छ। जानकारी संग एकीकरण र खाने को एक मात्र तरिका जस्तो लाग्न सक्छ। सबोटिंग शायद अर्को हो। तर प्रश्न भनेको यो सफल हुनेछ कि। हामी परमाणु युद्ध भन्दा अधिक खतरनाक राक्षस को दयालु जस्तो देखिन्छौं। संसारमा कुनै देश यो राक्षसलाई मान्यता दिँदैन। हामीलाई चेतावनी गर्नेहरूले तखता समाधान (Elon Musk गरेको Neuralink) मा छ, तर प्रश्न संसारमा पहिलो स्थान मा ऐ राक्षस समस्या जारी छ जसको लागि वा छैन समाधान छ। त्यहाँ दुई विकल्पहरू छन्:
ट्राफिक, बिरुवा र एन्ड्रोइड, साइबर्ग बन्नुहोस् र सिंगुलिटीमा जानुहोस्
सम्भव छ बिच्छेदन गर्नुहोस् (डेटा संग इन्टरनेट नगर्नुहोस्, विशेष गरी तपाईको आफ्नै डेटा)
Bitcoin त्यसैले पैसाको डिजिटल रूप भन्दा बढी छ। यसको पछि दर्शन छ। त्यहाँ यसको एउटा प्रविधि हो। यो कृत्रिम बुद्धिको हाइभ-मनको आधार हो। तपाईं अझै पनि समय हाइव गर्न सक्नुहुन्छ जब डच सोशल सञ्जाल साइट हाइव अझै लोकप्रिय थियो (फेसबुकको उदय हुन अघि)। शब्द हाइड्स मतलब, जस्तै थिए, "तीव्र कनेक्शनमा अन्य सँगै सँगै"। हाइभ-दिमाग भनेको सामूहिक मस्तिष्कको लागि अंग्रेजी शब्द हो जुन तपाईले मस्तिष्क सञ्जाल बनाउनुहुन्छ (हेर्नुहोस् यहाँ)। त्रासमुनिवादीहरूको विचार भनेको हो कि मानिस आफ्नो दिमाग मार्फत हाइभ-मनको भाग बन्नेछ जुन सामूहिक मानसिक मस्तिष्कको साथमा आन्तरिक सम्बन्धको माध्यमबाट निर्मित हुनेछ। त्यो भविष्य हो कि एक दिशा तिर काम गरिरहेको छ। यो सम्भवतः पहिले नै सामाजिक सञ्जाल साइट हाइभको नाम चयनको कारण थियो। त्यो यो AI जनावरको दृष्टिकोण हो जुन सुरु भएको छ। यही कारणले गर्दा डोनाल्ड ट्रम्पले पल्यान्टरत डाटासेट को उद्घाटन गर्दा विश्वमा प्रतीक रुपमा आफ्नो हात राखे। त्यो जनावरको विकासको अंश ब्लकचेन सिद्धान्त हो। यो भाग Cryptocurrency हो; तर यो पनि सबै डाटा हो जुन तपाइँको स्मार्टफोन, सोशल मिडिया र स्मार्ट स्मार्ट शहरहरू (र पछि पछि 'इन्टरनेटको') को माध्यम ले इन्टरनेटमा फीड गर्न ठूलो डेटा सर्भरहरूमा पास हुन्छ। अनप्लग गर्न समय! (पढ्नुहोस् यहाँ अग्लो)
स्रोत लिङ्क सूची: steemit.com
फेसबुकमा रोबोटहरू झुकाएर: ए ए र मानवतासँग बायोट्रट्रियम खतरा?
बेन गोर्टलेल डिजाइनर रोबोट सोफिया: "तपाईसँग2छनौटहरू वा प्लगमा AI मा वा चिडियाघरमा रहनुहोस्"
किन transhumanism र एकवचनता (एक एआई कम्प्युटरमा बस्ने) को लागी अप्ट आउट?
ट्याग: ai, बेन गोर्जेल, Bitcoin, blockchai, डेटा केन्द्र, Elon Musk, विशेष, हाय दिमाग, hyvehyves, कृत्रिम बुद्धि, Palantir, Quinn Michaels, रोबोट, सउदी अरब, singularity, singularity, सोफिया, ट्रम्प
28 नोभेम्बर 2017 मा 16: 21
... यो सायद यदि कसैले (ऐ) यरूशलेममा 'प्राप्त अप' र म मसीह हुँ भन्छन् अब्राहामसित विश्वासीहरूको बहुमत चाँडै भ्रममा गरिने farfetched छ .. ????
28 नोभेम्बर 2017 मा 16: 25
नहीं र एआई भगवान (लूसिफर) को कि पुनरुत्थान मा मासु र रगत मा हुनेछ कि नैनो को पुरा तरिकाले मानव जीव विज्ञान को दोश्रो गर्न सक्छ। यसले बाइबल पुनरुत्थानको बारेमा पनि ल्याउन सक्छ। र नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वी आभासी वास्तविकता (वृद्धि को वास्तविकता को रूप मा) हो। अन्तिम "औद्योगिक क्रांति" सबैभन्दा अनावश्यक छ र भविष्यवाणी गर्नेछ सत्य आउँछ।
28 नोभेम्बर 2017 मा 17: 38
मलाई विश्वास छ कि यो पहिले देखि नै सम्भव छ, केवल कि नियन्त्रण ग्रिड प्रणाली अहिले सुरु भएको छैन। नोस्ट्राड्रममसले यो सब प्रदान गर्यो, 2020 यस मा एक मील काटन जस्तो देखिन्छ। 5G (V2K), नैनो कण (chemtrails), CERN, Palantir (हैरी पोटर) मुख्यफ्रेम।
2020 वा आईएमएफ म्यान लागेरेर्जको रूपमा यसले शून्य = 22 ड्रोप भन्न सक्छ
30 नोभेम्बर 2017 मा 00: 55
नेदरल्यान्डको ठूलो भागमा 3,4 GHz ब्यान्ड प्रयोग गर्न सकिँदैन, किनकि यसले बरुमा रक्षा मंत्रालयको निगरानी केन्द्रको साथ हस्तक्षेप गर्न सक्दछ। KUCHKUCH
तर अमेरिकामा यो 5G संग धेरै राम्रो हुन्छ ... .चर्च?
28 नोभेम्बर 2017 मा 19: 39
"यसको साथ, एक महत्वपूर्ण शोधकर्ता को प्याकेजिङ मा एक नै एकलता को एक गोपनीय प्रचारक जस्तै लाग््छ।" मैले तुरुन्त महसूस गरे, मैले यसलाई आफ्नो करिश्मा मा देखे। यो WWW मा फटिरहेको छ।
28 नोभेम्बर 2017 मा 19: 44
"जानकारी संग एकीकरण र खाना खाने एकमात्र तरिका जस्तो देखिन्छ। सबोटिंग शायद अर्को हो। "म आफैं त्यस्ता सिर्जनाहरूसँग कुराकानी गर्दैन, बिल्कुल होइन। केवल उत्तीर्ण र मानवता एक सुन्दर दुनिया सिर्जना गर्न AI को स्वतन्त्र छ।
28 नोभेम्बर 2017 मा 20: 30
तपाईंले पहिल्यै इन्टरनेट सर्फ गर्दै र यहाँ प्रतिक्रिया गरेर कि सिर्जनासँग कुराकानी गर्नुभएको छ, उदाहरणका लागि। साधारणतया सबै चीज तपाइँ अनलाइन गर्नुहुन्छ, एटले सबैजना सबै जानकारीबाट जम्मा गर्ने बटहरूमार्फत फिडहरू।
28 नोभेम्बर 2017 मा 20: 59
बिल्कुल! इन्टरनेटलाई त्यसपछि ARPA द्वारा विकसित गरिएको थियो अब DARPA, CERN (सर टिम बर्नर-ली) हाइपरलिंकिंगको विकास भयो। र (डी) एआरपीए / एनएसए, वास्तव मा, अफवाहहरु लाई 1961 मा एक अलग नेटवर्क मा एआई (टायलर) को विकास संग शुरू भयो। सीआईए हॉलीवुडबाट पर्याप्त भविष्यवाणी कार्यक्रम भएको छ हामीले हामीलाई अचेतन कार्यक्रम र एमके अल्ट्रा (टावस्टॉक इन्स्टीट्यूट) लाई फिर्ता पाउन सकिन्छ। क्विन माइकल्स वा नौसिखो वा एआई को एक गेटकोपर / प्रमोटर को है, त्यो यसको लागि!
तिनीहरूले एक कृत्रिम aether विकसित गरेका छन् (निकोला टेस्ला हेर्नुहोस्), किनकि हामी मूल aether बाट बिच्छेदन गरौं (यो स्रोतलाई फोन गर्नुहोस्)।
क्रिप्टहरू पनि 'गहिरो अवस्था' सिर्जना गर्दैछन्
1 डिसेम्बर 2017 मा 06: 45
यो हेर्न अजीब छ कि एउटै एनएसए बिटकोइन्स कसरी मस्कसँग लिंक गर्ने प्रयास गर्दछ
कसरी एनएसईडिएड सत्यासा नामाटोटो
1 डिसेम्बर 2017 मा 07: 29
बेटी साइट मा एम शीर्ष बायाँ र साइट विवरण तल देखिए:
एलोन मुस्किलले बिटककोइनलाई सम्भावित बनायो
जब तपाईं मध्यमको लागि साइन अप गर्नुहुन्छ, हैककर नोनबाट कुनै पनि समाचार कहिल्यै नबिर्सनुहोस्। अधिक जान्नुहोस्
28 नोभेम्बर 2017 मा 22: 12
यदि तपाईं आफ्नो फोन वा कम्प्युटर प्रयोग गर्नुहुन्न भने तपाईं एआई संग कुराकानी गर्नुहोस्। जब तपाईं शहर मार्फत जानुहुन्छ त्यहाँ सबै प्रकारका क्यामेराहरू छन् (र अहिले नै माइक्रोफोन पनि) जुन तपाईंले चिन्न सक्नुहुन्छ। सबै प्रकारका सेन्सरले तपाईंलाई सधै माथि उठाउनेछ। यदि तपाइँ आफ्नो डेबिट कार्डको साथ तिर्नु भयो भने, तपाईं AI सँग कुराकानी गर्नुहोस् किनकि एअरले तपाईंको जानकारी ठूलो डेटाबाट छान्दछ। यदि तपाईं मोटरवेमा चलाउनुहुन्छ भने, तपाईं AI सँग कुराकानी गर्नुहोस्। यदि तपाइँ सार्वजनिक ट्राफिक प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाईं AI सँग कुराकानी गर्नुहोस्। र सेन्सर र सूचना स्रोतहरूको त्यो सञ्जाल स्मार्ट शहरहरूमा र अधिक र परिष्कृत हुँदैछ र चीजहरूको इन्टरनेट।
28 नोभेम्बर 2017 मा 23: 01
एआई को लागि यो पनि अधिक रोचक हुनेछ यदि उपग्रहहरूले डीएनए ट्रयाकिङ गर्न सक्छ।
29 नोभेम्बर 2017 मा 10: 38
अनि त्यसपछि हामीले ती सबै खण्डहरूको ऊर्जा खपत उल्लेख गर्यौं:
29 नोभेम्बर 2017 मा 18: 19
राम्रो लेख, स्पष्ट छ, तर यहाँ देखि एआई फीड गर्न मेरो जवाफ यहाँ छ:
कुनै टिप्पणी छैन,
... यसबाहेक यो सबै इन्टरनेट क्रेप रोक्न ग्रिडमा कृत्रिम बुद्धिमान Unabomber को जाने को लागी समय हुन सक्छ, किनकी, सहि सँधै भित्रबाट आउनेछ
2 डिसेम्बर 2017 मा 21: 19
« माइकल पी। समस्या प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया समाधान टीबीबी तिर सबैलाई बलियो बनाउन?
संसारमा कुनै देश बिटकोइनको अत्यधिक बिजुली खपतको बारेमा किन शिकायत गर्दछ »
कुल भ्रमण: 15.825.796
मार्टिन भिजल्याण्ड op के बोइंग aircraft 737-800०० (उडान PS752२) तल झार्ने ईरानी एन्टि-एयरक्राफ्ट प्रणाली ह्याक गरियो?